Kodachi distro miorina amin'ny Debian mifantoka amin'ny tsy fitonona anarana | Avy amin'ny Linux
Kodachi distro miorina amin'ny Debian mifantoka amin'ny tsy fitonona anarana
Kodachi dia fizarana Linux izay mbola tsy noresahiko, izay dia mifototra amin'ny Debian Live + XFCE ary fizarana azo antoka, tsy mitonona anarana ary manohitra ny forensika.
Raha vao nanomboka ny solosaina Kodachi, mifandray mivantana amin'ny VPN (natolotry ny ekipan'ny Kodachi miaraka amin'ny safidin'ny firenena fiaingana, mba hahitanao ny fitokisanao azy ireo) sy amin'ny Tor.
Y DNSCrypt dia azo atao ihany koa. Tsy mila manamboatra na inona na inona ianao ary tsy mila manana fahalalana Linux be dia be vao hampiasa azy.
Avy eo, izay rehetra ataonao amin'ity rafitra miasa ity dia hampiasa ilay fahatsiarovana vonjimaika voatahiry ao anaty RAM, noho izany, raha tsy hoe misy fanafihana miorina amin'ny fitrandrahana ireo fampahalalana voatahiry vonjimaika ao amin'ny RAM, manomboka izao dia milamina ny fampahalalana nampiantrano anao hanjavona ny làlanao raha vantany vao maty ny masinina.
ny fitaovana izay mety ho hitantsika ao amin'ny rafitra dia ahitana mpamaky adiresy MAC, Hafatra Pidgin Bitcoin ary poketra litecoin, TrueCrypt, ary verberypt KeePass, miampy PeerGuardian, GnuPG, FileZilla, ary fitaovana hanadio ny RAM-nao amin'ny fomba panic na hanimba tanteraka ny fametrahana anao (raha nametraka an'i Kodachi ianao, izay tsy hevitra tsara indrindra).
Kodachi dia rafitra fiasa mivantana, izay afaka mandefa saika ny solosaina rehetra amin'ny kapila DVD, USB stick, na karatra SD. Ny tanjony dia ny hitahiry ny tsiambaratelonao sy ny anaranao ary manampy anao:
Ampiasao amin'ny fomba tsy fantatra anarana ny Internet.
Ny fifandraisana Internet rehetra dia voatery mandalo ny tamba-jotra VPN ary avy eo ny tamba-jotra Tor misy ny encryption DNS.
Aza avela hisy soritra amin'ny solosainao ampiasainao, raha tsy mangataka azy mazava ianao.
Mampiasà fitaovana cryptographic sy tsiambaratelo manara-penitra mba hamehezana ireo rakitrao, mailakao ary hafatra avy hatrany.
1 Momba ny Kodachi 4.0
2 Sintomy ny Kodachi 4.0
Momba ny Kodachi 4.0
Vao tsy ela akory izay ity fizarana Linux ity dia nohavaozina, Miaraka amin'izany miorina amin'ny Debian kinova 9.5 izao miaraka amin'ireo fonosana sy fanavaozana hatreto.
Ny tontolon'ny birao dia Xfce, miaraka amina kinova kinova 4.9.0.8.
Ilay kinova vaovao 4 koa manohana ny famoahana voalohany amin'ny rafitra UEFI sy ny boky miovaova maharitra. Misaotra ireo script fanombohana voaatsara, Kodachi dia mitondra haingana kokoa noho ny teo alohany. Ho fanampin'izay, nahazo endrika vaovao ny birao.
Ny rindrambaiko encryption Truecrypt, izay nolovain'i Veracrypt, dia voatery nesorina. Ary koa, ny mpandrindra dia nanampy fonosana rindrambaiko maro hafa, anisan'izany ny OpenShot, Icedove, Atom, Rkhunter, Steghide, na i2p Zulucrypt.
Ireto misy fanovana lehibe eto amin'ity kinova ity:
Nanampy fitaovana fanovana horonantsary Open Shot,
Nanisy fitaovana fiarovana na tambajotra mifandraika amin'izany: Rkhunter, Steghide, Gnome Nettool, GResolver, SiriKali, Deny HHosts ary Signal.
Amin'ity kinova vaovao ity Nvidia, Detect, Florence, i2p, Zulucrypt, Zulumount, Onion Circuits, Onion share ary Gnu Net no nampiana.
Azo atao izao ny mampiasa ny serivisy DNS an'ny CloudFlare mihoatra ny serivisy TLS nampiana tamin'ny alàlan'ny DnsCrypt.
Ny vahaolana IP ho an'ny daholobe dia nitombo.
Nisy plugins Firefox nampiana.
Boky hafahafa izay manohana ny fikirizana.
Tohano amin'ny boot UEFI.
Esory ny Komodo-Edit ary soloino ny Atom.
Electrom LTC / BTC nosoloina kitapom-bolongana Exodus.
Lohahevitra vaovao, kisary ary sary sokitra.
Hatsarao ny sora-tanana Kodachi rehetra.
Amboary ny olana sasany ao amin'ny Tor sy DNSCrypt.
Hatsarao ny Conky sy GUI.
Ary fanovana hafa.
Sintomy ny Kodachi 4.0
Raha te hanandrana ity distro Linux mifantoka amin'ny tsy itonona anarana mpampiasa ity ianao dia afaka mahazo ny sarin'ity kinova vaovao ity navoaka tao amin'ny tranokala ofisialiny
Mba hanaovana izany, mandehana fotsiny amin'ny tranokala ofisialy ary amin'ny fizarana fampidinana azy dia azonao atao ny misintona ny ISO an'ny rafitra.
Tokony hamafisiko fa ity rafitra ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny kinova 64-bit. Raha fintinina dia feno tanteraka izy io (kely noho ny Tails) ary miorina tsara.
Ny rohy fampidinana dia ity.
Ny sary dia afaka mamonjy amin'ny alàlan'ny fanampian'ny Etcher.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Kodachi distro miorina amin'ny Debian mifantoka amin'ny tsy fitonona anarana
Misy fampitahana amin'ny Tails?
Valiny tamin'i Charlie Brown
windroidlinux dia hoy izy:
Afaka mihazakazaka amin'ny iray izy io. imac? misaotra ..
Valiny amin'ny windroidlinux
Isard dia hoy izy:
Raha manana maritrano "intel" 64-bit ianao, raha ny fitsipika dia eny. Tokony ho hitantsika ny fampifanarahana ny karatra tambajotra (saika azo antoka fa eny), ny karatra horonantsary (saika azo antoka), sns.
Rehefa mandeha amin'ny flash drive izy dia tsy maninona ny manandrana azy. 🙂
Valiny tamin'i Isard
fraciel dia hoy izy:
Homeko tolo-kevitra tsara ianao
Mamaly an'i fraciel
Azonao atao ve ny manao fampitahana amin'ny hafa toa an'i Qubes sy rambony?
Manamora ny fanomezana anarana ny fenitra Wi-Fi ny Wi-Fi Alliance
Richard Stallman: tsy maimaim-poana ny fahazoan-dàlana amin'ny Fizarana Commons